Guygan Dufanku Wuxuu Jecel Yahay Suuqgeynta Coca-Cola | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 19, 2013 Axad, Agoosto 30, 2015 Douglas Karr
Waan ka weynahay baruurta… xaqiiqdii, waxaan u baahanahay inaan lumiyo culeyska nin isku celcelis ah si aan ugu noqdo baruur uun. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku canaanto tayroodhkayga, hidde-sideydayda, shaqadayda, heerka walaacayaga… wax. Xaqiiqdu waxay tahay, in kastoo, ay tahay wax toosan oo toosan. Markaan wax cuno oo aan jimicsado, miisaankaygu wuu dhacayaa. Markaan jimicsi sameynin ama aanan wax cunin si sax ah, culeys ayaa igu kordha. Inta lagu jiro waqtiyada walaaca waa markaan u janjeero inaan ka tago caafimaadkeyga oo aan ku quusto yaamayska… oo waqtiyadu ay aad uga walaac badnaayeen sanadihii ugu dambeeyay.
Dufan ahaanta kama imaan la'aanta aqoon la'aanta nafaqada ama fahamka jimicsiga iyo sida jirku u shaqeeyo. Waxaan diyaar u ahay inaan sharad geliyo inaan aqriyay buugaag badan, daawaday dokumentiyo badan oo aan ka fahmay inbadan oo nafaqada ah inta badan dadka caafimaadka qaba. Waxaan sidoo kale sharad geli lahaa inaan ka lumay miisaan ka badan qof walba… boqollaal rodol sannadihii la soo dhaafay. Nasiib darrose, waxaan kasbaday qaar badan, kuwo badan oo ka mid ah awood darradayda iyo mudnaanta caafimaadka iyo isu dheelitirka shaqada noloshayda.
Jacaylka aan u qabo bur cad iyo sonkor marka laga reebo sidoo kale jacaylka aan u qabo internetka iyo xorriyadda. Internetku wuxuu bixiyaa warbaahin dadweyne halkaas oo qof ama shirkad aysan u baahnayn inay sugaan saxafiyiinta ama dowladda si ay tooshka ugu saaraan. Shirkad ayaa arrimaha ku wareejin karta gacmaheeda, waxayna horumarin kartaa farriinteeda - iyada oo aan la sifeyn, ra'yi, ama faafreeb. Waa sababta aan u jeclahay xaqiiqda taas Coca-Cola waxay wax ka qabanaysaa khataraha caafimaad la xidhiidha alaabooyinkeeda oo ku soo socda taxane ah xayeysiis cusub.
Waxaan ku noolnahay adduun markasta oo wax waliba si xun u khaldamaan, waxaan dareemeynaa inaan kafiicno farta oo aan canaanano qof kale halkii aan falanqeyn lahayn sida aan shaqsiyan saameyn ugu yeelan karno isbedelka. Shirkaduhu waa bartilmaameed sahlan, gaar ahaan markay faa'iido badan leeyihiin. Sidee ayey u fududahay kaliya in lagu eedeeyo Coca-Cola aafadayada buurnida ah ee aan caruurteena uga sii firfircooneyno howlaha banaanka, dhigista talefanada casriga ah, aadayo qolka jirdhiska, ama cunida kuwa caafimaadka qaba. Waan eedeynaa suuqgeynta wax soo saarka heer caalami ah halkii laga beddeli lahaa shaqooyinka u baahan tamar yar ama aan lahayn.
Waxyaabaha ku habboon suuqgeyn kasta ayaa ah istiraatiijiyadda lagu doonayo in dad badani ay iibsadaan wax badan oo ka mid ah wax soo saarkaaga badanaa. Ma aaminsani in suuqgeynta ay tahay wax isdaba marin, laakiin waxaan dareemayaa in dadku ay mas'uuliyad yar ka qaadayaan ficilladooda. Qof kastaa wuu ogyahay in soodhada aysan aheyn cabitaan wax ku biiriya qaab nololeed caafimaad leh. Uma baahni inay Coca-Cola ii sheegto arintaas… laakiin waan ku faraxsanahay inay u sheegaan qof kasta oo ku weeraraya xaqiiqooyinka ku saabsan wax soo saarkooda.
By the way… Waxaan hayaa dhowr koob oo Coke ah xalay, waxayna ahaayeen kuwo cajiib ah. Maanta, waxaan cunay quraac caafimaad leh, gooyay cunto fudud, waxaanna la qaatay casho aad u caafimaad qabta. Berrito waxaan qorsheynayaa raacitaanka baaskiilkeyga (maanta waan xanuunsanahay ka dib markii aan waday markii ugu horeysay bilooyin isbuucii hore). Uma baahni Coca-Cola ama dowladda inay ii sheegto waxaan u baahanahay inaan barkinkeyga berrito baaskiilkaas ku fuulo.
Waan cayilay, doqon ma ihi.
Maamul Tusaalooyin badan oo WordPress ah oo la maamul ManWW
Boostada weyn Doug! Ka shaqeynta inaan noqdo qof caqli badan oo iga caafimaad badan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay iyo 2013 sidoo kale. Waa tan caqli iyo xilkasnimo iyo doqon yar oo eedaynaysa wax kasta oo kale laakiin nafteenna!
Oh, oo waxaan ballanqaaday inaan la raaco dhacdadii ROOBKA 2013 walaalkay bishii Julay. Marka, waxaan helayaa xoogaa yar oo koore ah oo diyaargareeya taas sidoo kale.
Cajiib! Nasiib wanaagsan!!!
Habka caqliga leh, sida caadiga ah, laga bilaabo Coke. Waxay i xasuusisaa khamaarka - "si masuuliyad leh u ciyaar". Shakhsi ahaan, qoraalkani wuxuu tusaale u yahay dhowr ka mid ah sifooyinkaaga ugu xiisaha badan: noqoshada dhabta ah iyo hufnaanta. Marka laga soo tago xaqiiqda ah inaad tahay suuq yaqaan caqli badan, sifooyinkaasi waxay gabi ahaanba kaa soocayaan xirmada waxayna kaalin ka geystaan ​​guusha shirkaddaada. Waxaad tahay nin cajiib ah, Mr. Doug.
Mahadsanid @ twitter-9755792: disqus!
Miyaan ahay shakiga ku jira qolka raba in ay sidan yeeli lahaayeen 30 sano ka hor halkii aan ka walwalin lahaa dufanka ka soo baxa macaashka? Aniguna had iyo jeer waan necbahay inaan bilaabo shaki maxaa yeelay xaqiiqda ah in DK uu ku soo laabtay weerarka laadku waa qurux.
Way fiicantahay in Coke uu sameynayo suuqgeyn caafimaad oo miyir qabo waa wax fiican - laakiin isla markaa waxaan u maleynayaa inay tahay sababtoo ah hadda lacag ayaa ku jirta dadka ku nool Atlanta. Soodhaha ayaa ku siiya tamar deg deg ah isla markaana isla mar ahaantaana ku fuuq bixiya taas oo ah sababta aad weligaa waligaa u yeelan karin. Uguyaraan ma awoodo. Taasi wax laga qaban maayo. Waxa wax looga qabanayo ayaa ah in dadku tirin karaan kalooriyada oo ay cabi karaan in badan oo Coca-Cola ah isla markaana ay kalooriyeyaasha ka qaadan karaan meel kale - sida Shukulaatada ama inaad la socoto jiisburger halkii aad ka raaci lahayd Big Mac @ McDonalds.
Ma jiraan malaa'igo ku jira suuqgeynta, laakiin dagaalkaagu waa mid sax ah waana ku faraxsanahay, 'bromance.